Topnepalnews.com | ओली सरकार फाल्ने यस्तो छ डिजाइन
ओली सरकार फाल्ने यस्तो छ डिजाइन
Posted on: May 01, 2016 | views: 267
काठमाडौं,चैत ८ । २०७२ चैत ७ गतेबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणबाट के के सम्झौता बोकेर ल्याउलान् भन्ने ठूलो उत्सुकता पैदा भइरहेका बेला अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो हो – ओली भ्रमणमा चीनका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन्छ कि हुँदैन ? संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएमा त्यसमा नेपालको संविधानलाई स्वागत भन्ने शब्दावली राखिन्छ कि राखिँदैन ? चीन उडेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका सदस्यहरुले यकिनसाथ यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् । ओलीको भ्रमणमा पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौता नहुने निश्चितप्राय भएको छ । भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन पेट्रोल आयात सम्झौता हुन्छ भनिरहेका थिए । तर सम्झौता नहुने भएपछि उनी यति बिच्किए कि प्रधानमन्त्रीलाई बिदाई गर्न विमानस्थल समेत गएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणबाट फर्केपछि सरकारसँग काम गर्नका लागि राजनीतिक एजेण्डा हुने छैन । त्यसो त सरकारले गर्नुपर्ने हजारौं हजार काम हुन्छ र छ पनि । तैपनि गर्नुपर्ने ठूलो रानजीतिक काम छैन । त्यसपछिको काम हो संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने । हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको छ । ओली फर्केलगत्तै अधिवेशन बोलाउने पक्षमा साना राजनीतिक दलहरु रहेका छन् तर सरकार भने एकैपटक बजेट अधिवेशन बोलाउने पक्षमा रहेको बुझिन्छ ।
बजेट चाँडै ल्याउनुको मुख्य कारण हो – सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, आफ्नो सरकार भएको बेला बजेट ल्याइहालौं । आफूले भनेअनुसार बजेट नल्याउन्जेल जसरी पनि सरकार टिकाउने पक्षमा ओली सरकार छ । तर, चीन भ्रमण सकिएलगत्तै ओलीको राजनीतिक बलि चढाउन कांग्रेससहित साना दलहरु तम्तयार भएर बसेका छन् । कांग्रेसभित्रको नवसत्तासीन देउवा पक्षले पनि सरकारमा जान हतार देखाइरहेको छ ।
कांग्रेसको देउवानिकट उच्च नेताका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दललाई योजनाबद्ध ढंगले सरकार छाड्न लगाइनेछ । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।